Askarta Puntland ma waxey noqdeen looma ooyaan?
Farriin ku socota maamulka iyo dadweynaha reer Puntland
Marka hore mahad idilkeed waxa iska leh Allaah, naxariis iyo nabadgelyana rasuulkeenii ayeey korkiisa ahaatay. Kadib akhristayaasha sharafta lahow iga gudooma salaanta qiimaha baddan ee Islaamka (A.C.W).
Intaas kadib muddo haatan laga joogo labo sano waxeynu ka aqrinaynay boggaga wax lagu soo qoro ee Soomaalida, in saddex muwaadin oo u dhashay Puntland kana mid ahaa askarta daraawiishta laga qabsaday xeebaha puntland, loona kaxeystaya dalkaas Thailand, ayna illaa iyo hadda ku xiran yihiin xabsiyada Thailand. Haddaba waxa isweydiin leh, maamulka cadde Muuse Miyuusan arintaas ka warqabin, mise dan kama laha, mise waan waan ayaa u socota mise wararka ay qorayaan Boggaga Soomaalida ayaan waxba ka jirin. Su’aalahaas ayaa wanaagsanaan laheyd in laga soo jawaabo.
Askartan oo sida la sheegayo ka mid ahaan jiray ciidamada ilaaliya Xeebaha Puntland, ayaanan maqal cid warkooda ku jirta ama xil iska saareysa, taasoo ku tuseysa in aanan dan laga laheyn muwaadinka Soomaaliyeed ee u kacay inuu difaaco ciidiisa, haba ugu daraadeen kuwa isku sheegaya maamulka Puntland. Waxaan maqli jiray Askariga Soomaaliyeed qiimihiisu waa intuu dhaqdhaqaaaqayo, oo hadduu mar dhaawacmo ama dhinto ma jiraan cid danboo isweydiinaysaa. Way dhici jirtay waagii ay jirtay dowlad dhexe oo xoog leh, in waxoogaa uu qadarin iska lahaa Askariga Soomaaliyeed, laakiin maanta ma jirto cid u doodeysa.
Dunidan aynu ku noolnahay, gaar ahaan waddamadan reer galbeedka, iska daa Askari ama shaqsi ay howl u dirsadeen, xitaa kuwooda iska dalxiisaya, oo laga yaabee inay danbiyo ka galaan waddamada ay u dalxiiska tageen, haddii la xiro, ma maleyn kartid guuxa iyo qeylada is qabsaneysa, taasoo lagu qasbayo waddanki, xirtay inuu kusoo daayo 24 saacadood gudahooda. Taas waxa kaaga cad in shaqsigaa u dhashay waddamada kale in laga sareysiisyay cid walba, halka kan Soomaaliga ah uu noqday looma ooyaan. Haddii wiilashan laga qabsan lahaa waddamo kale ama meel uusan maamulku shaqo ku laheyn, waxeynu oran laheyn waxey la mid yihiin Soomaalidaa kale ee daafaha adduunyada isaga baab’aya. Laakiin deegaankaagi halaga kaxeysto, hana ka hadlin runtii wax ay dhegaha caafimaadka qaba ay maqli karaan maaha.
Wey dhici kartaa in uu maamulku xiriiro la sameeyo dowladda Thailand oo laxiriirta arimaha wiilashan, laakiin aynaan annagu ka warqabin. Haddii ay taasi jirto waxeynu idiin leenahay naga raali ahaada, laakiin naga soo qanciya oo nala soo socodsiiya halka xaal uu marayo. Haddii ayan jirin wax xiriir ah oo lala sameeyay, waxaan si naxariis leh uga codsaneynaa Maamulka Puntland, oo uu garwadeenka ka yahay Madaxweyne Cadde Muuse in arintaasi guddi gaar ah loo saaro, oo la xiriira dowladda Thailand. Runtii maaha arin indhaha laga qabsan karo, maaha arin uu shaqsi damiir leh iska indho tiri karo, maaha wax qalbiga uu jecleysayao. Weliba sida lagu soo waramayo ragga mid ka mid ah waa dhaawac culus, oo xabsiga ayaa lagu jir dilay, mid kale maskaxiyan ayuu u xanuunsaday.
War aaway hay’adihi isku magacaabi jiray Xuquuqul insaan ee ka jiray Puntland, aaway wax garadkii aaway aqoonayahnadii, aaway eheladiii wiilashan, aaway cuqaashi, isimadii, iyo in alla inta damiirku u ehelka aheyd ee ku nool puntland. War arintaan yaan la yareysan, runtii waa arin sumcad xun ka tegeysa.
Waxaan qoraalkeyga kusoo afjarayaa arintaan si wadajir ah haloogu istaago, oo maamulka puntland halagu saaro cadaadis sidii uu arintan wax uga qaban lahaa. Haddii arintan ay tahay mid aan wax ka jirin, iyadana halasoo cadeeyo si loola xisaabtamo boggaga warkan meesha ay ka keeneen. Arintan waxaan leeyahay haloo guntado oo wiilasheen arxan darada ku heysata Thailand halaga soo furdaamiyo. Wiilashana waxaan leeyahay sabra, oo Allaha ayaa Faraj kheyr leh idiin furi doona Inshaa’Allaah.
Cabdixakiim Jaamac Jooje.
Aragtida dadweynaha ee ku saabsan wiilasha ku xiran Thailand